ရွှေဝါပြည်: သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးများ
၁၉၈၃-၈၄ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးပါ။ ၇ ဇူလိုင် အထိမ်းအမှတ်တွေကို ပန်းချီမှာ ဝှက်ဆွဲထားတာပါ။ ပန်းချီဆရာက "မောင်မြင့်ဌေး" ပါ။ ဘယ်နားက မှန်ထောင်ကြည့်ရင် ပုံနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘာပုံဆိုတာတွေတော့ မေ့နေပါပြီ။ အခေါင်းထမ်းနေတဲ့ပုံ၊ ဝမ်းလျားမှောက်ပြီး သေနတ်ပစ်နေပုံ၊ ချီတက်နေပုံ စတာတွေပါပါတယ်။ သေချာတာကတော့ စာအုပ်ကို ပြောင်းပြန်ထောင်ကြည့်ရင် အ-သုံးလုံးသင်နေတဲ့သူတွေက လက်သီးဆုတ် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Credit to Myanmar Cupid Community Forums
မြန်မာကျူးပစ်မှာ မှတ်မိသူတွေ ပြန်ပြောပြတာလေးတွေ တွေ့လို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါ ၇ ဇူလိုင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရဘူးထင်တယ် . . . ဦးသန့် အရေးအခင်းအပြီးမှာ ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အရေးအခင်းတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး သရုပ်ဖော်ထားတယ်လို့ ထင်တယ် . . .
သစ်ပုပ်ပင်ရဲ့ အကိုင်းအခက်တွေက ကဒေါင်းက နေတဲ့ပုံ၊ အဲ့သည် သစ်ခက်တွေကြားထဲမှာလည်း သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ပုံတွေ ရှိတယ်လို့ မှတ်မိနေတယ် . . . ဆွဲထားတဲ့သူက အရောင် အမှိန်အဖျော့တွေ နဲ့ သစ်ခက်လိုင်းတွေ စပ်ဟပ်လို့ ပုံဖော်ထားလို့ သေချာ စိုက်ကြည့်မှ မြင်ရမှာမို့လို့ မူရင်း အရောင်စိုစိုစာအုပ်ကို ကြည့်မှ ရေးရေး တွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ် . . . မှတ်မိသလောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးခေါင်းပုံတွေ လို့ဆိုတယ် . . .
နောက် အောက်ကို ဆက်ဆင်းလာရင် ပုံရဲ့ ညာဘက်ထောင့်ကို ဗဟိုထားပြီး အစိမ်းရောင် အစက်အပြောက်တွေက စက်ဝန်းတစ်ခုရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက် ရှိနေလို့ သည်လိုပုံ လေးခု ထောင့်ချင်းဆိုင် ဆက်လိုက်ရင် လွမ်းသူ့ပန်းခွေတစ်ခု ရတယ်တဲ့ . . . အဲ့သည်ထဲမှာတော့ ခုံတန်းလျား အဖြူရောင်လေးတစ်ခုဟာ ခြေထောက်တစ်ဖက်ပဲ ရှိသမို့ ၇ (၇) ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီး မြင်နေရတယ် . . .
(Credit to : koluchaw @ Myanmar Cupid)
Posted by tin min htet at 10:07 PM
မျက်နှာဖုံးအောက်ဆုံးဘယ်ဘက်ဒေါင့် ထင်တာဘဲ တင့်ကား တစီးဆွဲထားတယ် သေနတ်နဲ့ ပစ်နေပုံ ကျောင်းသားအလောင်းချနေပုံ